XOG: Cabsida iyo walwalka Amniga ee Wasiirrada dowlada Somaliya oo sii kordhaya (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Cabsida iyo walwalka Amniga ee Wasiirrada dowlada Somaliya oo sii kordhaya...
Muqdisho (Halqaran.com) – Sida wararka ay ku helayso Halqaran.com, ayaa sheegaya, in ay wasiiradda Xukuumaddu blilaabeen hab dhaqan cusub oo la xariira ammaankooda, ka dib markii ay diideen in xaafiisyadooda nadiifiyayaal loo diro, sidaas oo kalena ay jeebabkooda gashadeen furayaasha xaafiisyada.
Arrintan ayaa ka dhigan ficillada ammaanka oo gaaray halkii ugu hooseysay ay cabsiduna ka billaabatay wixii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday xarunta gobalka Banaadir.
Wasiirradda qaarkood ayaa sheegay in aysan marnaba aamineyn cidna, sidaas awgeedna ay waajib tahay in sidan ay sameeyaan si ay u xaqiijiyaan ammaanka.
Wasiiraddu waxay u arkeen ficilkii lagu qarxiyey allaha u naxariistee Guddoomiyihii gobolka Banaadir Eng. Yariisow oo xaafiiskiisu ku yaalay halka ugu ammaanka badan ee Muqdisho in ay tahay arrin iska fududaan karta in xaafiisyada qaraxyo lagu diyaariyo.
Tallaabada ay wasiirradda iyo madaxda dawladdu ku dhaqaaqeen ayaa kusoo beegmaysa xili baaritaanada hordhaca ah ee lagu sameeyey weerarkii xarunta gobalka Banaadir, ay muujinayaan in wax badan oo qariban ay dhex socdaan dawladda, gaar ahaana waxa loo yaqaano Labo shaarlayaasha.